မော်စကို: အမေရိကန်ဗင်နီဇွဲလားမှာသူတို့ရဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကိုရပ်တန့်မပါဘူးဆိုရင်, တကဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ရလိမ့်မည် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ • မူဝါဒ "မော်စကို: အမေရိကန်ဗင်နီဇွဲလားမှာသူတို့ရဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကိုရပ်တန့်မပါဘူးဆိုရင်, တကဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်
ဗင်နီဇွဲလားရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ရေးရာအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောက်စွက်ဖက်တိုင်းပြည်အတွက်အခွအေနဆိုးရွားပြုအံ့, သတင်းထောက်များကိုပြောကြားခဲ့သည် မာရီယာ Zakharova ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရအမျိုးသမီး.
"ဝါရှင်တန်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေတစ်စီးရီးသူတို့ကဒီဇာတ်လမ်းကိုအတိုင်းလိုက်နာပြုပါလမ်းကဆိုးသောသက်ရောက်မှုကိုမမွငျပါဘူး။ လူတိုင်းကရှုမြင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာလိုက်တယ်င်သူမကပြောပါတယ်။ ဝါရှင်တန် [ဗင်နီဇွဲလား၏, မှတ်စု] ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်၎င်း၏မူဝါဒဆက်ရှိနေသေးလျှင်ဤတစ်ဘေးအန္တရာယ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ "
ဤအတောအတွင်းဗင်နီဇွဲလားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗလာဒီမာ Padrino လိုပက်ဇ်ကသူလိုအပ်ခဲ့လျှင်တုံ့ပြန်ထဲမှာလက်နက်တွေသုံးစွဲဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည် အာဏာသိမ်းကြိုးပမ်းမှု.
အစောပိုင်းကနေ့, အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်, Juan Guaido, မိမိအထောက်ခံသူများ, La Carlota ၏လေကြောင်းအခြေစိုက်စခန်းအပြင်ဘက်ကိုစုဝေးစေကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အခါ 'လု၏နောက်ဆုံးအဆုံး "၏စတင်ကြေညာခြင်းနှင့်တောင်းဆို လေးနက်နှငျ့ရငျဆိုငျ site.The ဆန္ဒပြပွဲများဗင်နီဇွဲလားအတွက်လပေါင်းများစွာများအတွက်ဆက်လက်အစိုးရ, တဘက်၌သူတို့ရန်ပွဲအတွင်းဆန္ဒပြသူတွေ join အကျပ်အတည်းများéconomique နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတင်းမာမှုများနှင့်အတူဒွန်တွဲ။ အဆိုပါ 23 ဇန်နဝါရီလ Guaido Juan ထောက်ခံသူတစ်လူအစုအဝေးမတိုင်မီခေတ္တသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြပွဲများနိုင်ငံအနှံ့လျော့နည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်လာကြပါပြီသို့သော် ထိုအချိန်မှစ. , ပါဝါ, အရပျ၌ခိုင်မြဲစွာနေဆဲဖြစ်သည်။